warkii.com » Shabakada BOI oo Flop weyn ku tilmaamtay goos gooska Dil Bechara iyo qiyaanada kooxda Filimka oo banaanka timid!!
Shabakada BOI oo Flop weyn ku tilmaamtay goos gooska Dil Bechara iyo qiyaanada kooxda Filimka oo banaanka timid!!
Shabakada Box-office India (BOI) ayaa maqaal kasoo saartay goos gooska Dil Bechara ee labo maalmood baraha bulshada qabsaday waxayna ku tilmaamtay inuu yahay goos goos xun oo Flop ah fadlan hoos kaga bogo maqaalka oo Filimside idiin soo turjumtay.
Waxaa lasoo bandhigay goos gooska Dil Bechara kaaso markii hore u muuqday in tiyaatarada laga daawan doono balse hader si Online loo daawan doono waxaa wax lagu qoslo ah in goos gooskan loo adeegsaday Program-ka Bots-ka ee badinaayo tirada Like saarayaan muuqaalka waana Softwate loo adeegsado waxyaabaha noocaas ah waxuuna fududeeya like badan inuu helo muuqaalkaada si Automatic ah waana Like Fake ah.
Arinkaan waxaa lagu ogaaday markii Dil Bechara Youtube-ka lasoo dhigay goos gooskiisa saacado gudahooda waxu helay 480K Views balse arinta dadka ka qoslisay ayaa ah in isla waqtigaas uu helay 1.3-Milyan like waana wax lala yaabo macquulna ma ahan muuqaalka tirada Like saareen inee ka badnaadaan tirada Viewskiisa guud sidaa aawged 1.3-milyan oo like ah waa 3-jibaar kudhow Viewskiisa oo ahaa xiligaas 480K Views.
Dadka jaahil ma ahan wax walbana wey fahmi karaan kooxda Dil Bechara-na wey ka wareertay waxaa fiicned ine sugaan inta Views badan muuqaalka ka helaayo markaas kadib borograamkooda iska isticmaalaan ee Like ubadinaayey dhanka kale waxay isku dayayaan inee dadka u fiicneeyaan goos goos dhanwalba ka xun waana mid kamid ah goos goosyada ugu xun Bollywood dhawaanahan la imaadaan.
Kooxda Dil Bechara markii horeba waxay qorsheynayeen in Online loo daawado filimkaan waayo miisaaniyada uu xambaarsanyahay waa 38 Crore kudhowaad si aysan qasaaro ula kulmin waxay rabeen Online in loo daawado waayo tiyaatar hadii la saaro dadka soo aadi lahaayen ayaa yaraan lahaayen xitaa Covid-19 jiri laheen Online ayaa loo daawan lahaa mashruucan.
Sababta Views-kiisa u sare kacay waa dadka oo ka qiireysan geerida Sushant iyo qof walba oo iska jeclestay inuu soo arko muuqaalka udambeyay Sushant marka haduu noolaan lahaa intaan Views ma heleen ee geerida Sushant ayuu ku helay midaas haku farxaan horta kooxda mida labaadna bandhiga Sushant heer sare ayuu ahaa balse goos goos dhanwalba kaxun tayo ahaan iyo isku xir ahaan qaab jiliin atoore ma wadi karyo.
Fox Star iyo Disney Hotstar oo labo shabakad walaalo ah ayaa isku kaashan doonaan sidii loo soo celin lahaa lacagaha Dil Bechara waxayna qaali ka dhigi doonaan xuquuqda lagu iibsanaayo Filimka marka Tv-yada laga daawanaayo iyo shabakadaha kale ee Online looga daawan doono midaasna waxay ka saacidi doontaa in lacago badan soo celiyo inkastoo adagtahay inuu soo celiyo dhamaan lacagihiisa.